रोहित-शिखर’ विश्वकै सफल ‘ओपनिङ जोडी’, भारतले ट्रफी उचाल्ला ? – Saurahaonline.com
रोहित-शिखर’ विश्वकै सफल ‘ओपनिङ जोडी’, भारतले ट्रफी उचाल्ला ?
३० मेदेखि इंग्ल्याण्डको वेल्समा क्रिकेटको १२ संस्करणको महाकुम्भ अर्थात् विश्वकप हुँदैछ । भारतीय टीमले आफ्नो पहिलो खेल जुन ५ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध साउथेम्प्टनमा खेल्नेछ । यसअघि भारतीय टीमले न्यूजील्याण्ड र बंगलादेशविरुद्ध एक-एक वार्म अप म्याच खेल्नेछ ।
सचिन तेन्दुलकर र वीरेन्द्र सहवागले सन्यास लिएपछि रोहित शर्मा र शिखर धवनले भारतीय टीममा शीर्षक्रममा ब्याटिङ (ओपनिङ) गर्ने जिम्मेवारी पाए । उनीहरू ओपनिङमा सफल पनि भएका छन् ।
रोहित-शिखरको जोडीलाई संसारकै सफल ओपनिङ जोडी भन्न थालिएको छ । रोहित र धवनले मिलेर हालसम्म १०१ वान-डे म्याच खेलेका छन्, जसमा उनीहरूले ४ हजार ५ सय ४१ रन साझेदारी गरेका छन् । यो पछिल्लो १० वर्षकै ‘ओपनिङ जोडी’को सर्वश्रेष्ठ रेकर्ड हो । यी दुईले हालसम्म १५ शतकीय र १३ अर्धशतकीय साझेदारी गरेका छन् ।
अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा खेलाइएको पछिल्लो विश्वकपपछिको आँकडालाई मध्यनगर गर्ने हो भने रोहित र धवन विश्वभरका ओपनिङ जोडीभन्दा अब्बल सावित भएका छन् । भारतीय जोडीले यो चार वर्षमा ६० म्याच खेले, जसमा २ हजार ६ सय ९ रन साझेदारीमा बनाए । त्यसमा ८ शतकीय र ७ अर्धशतकीय साझेदारी समावेश छ ।
यी चार वर्षमा ओपनरमध्ये रोहित शर्माको ब्याटबाट बढी रन बन्यो । उनले ७१ म्याचमा ६१.१२ को औसतमा ३ हजार ७ सय ९० रन बनाए, जसमा १५ शतक र १६ अर्धशतक समावेश थियो । धवन यस सूचीमा ६७ म्याचमा २ हजार ८ सय ४८ रन बनाएर चौथो स्थानमा रहे ।
विश्वकपमा भाग लिएका सबै ओपनरको प्रदर्शनलाई नियाल्दा वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले ९ हजार ८ सय ५०, दक्षिण अफ्रिकाका हशिम अमलाले ७ हजार ८ सय ८०, बंगलादेशका तमीम इकबालले ६ हजार ६ सय ३६ रन बनाएका छन् । त्यस्तै ओपनरको हिसाबमा रोहित शर्माले ६ हजार ४३ रन बनाएका छन् । रोहितले ओपनिङ गर्नुअघि मध्यक्रमबाट खेल्थे । रोहितले हालसम्म २०६ वान-डे खेलेका छन्, जसमा १०३ खेल मध्यक्रममै खेले ।
एक दिवसीय क्रिकेटमा जमेका रोहित शर्मा र शिखर धवनको जोडीले यस पटकको विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने र त्यसैको बलमा भारतले ट्रफी उचाल्न सक्ने क्रिकेट पण्डितहरूले बताएका छन् ।